यस्ता छन् महिनावारी बिग्रने कारण, महिनावारी हुँदा के गर्ने ? के नगर्ने ? | Kathmandu Pati Kathmandu Pati
यस्ता छन् महिनावारी बिग्रने कारण, महिनावारी हुँदा के गर्ने ? के नगर्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७९, ३० जेष्ठ सोमबार १३:२४
काठमाण्डु – महिनावारी महिलाहरुमा हुने नियमित र सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । सामान्यतः २८ दिनको अन्तरालमा महिलाहरुमा सजस्वला हुने गर्दछ । महिनावारीका दौरान महिलाहरुले ख्याल राख्नुपर्ने धेरै कुराहरु हुन्छन् ।
कहिलेकाहीँ सानोतिनो हेलचेक्र्याइले पनि ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले हामीले महिनावारीका समयमा विभिन्न सावधानीका उपायहरु अपनाउन सक्छौं ।
– महिनावारीको सयममा गुप्ताङ्गबाट रगत बग्छ । तर कसैकसैको हकमा रगतको ढिक्का पनि निस्कन्छ । यसलाई आमरुपमा लिनु हुँदैन । यस्तो समस्या आएको खण्डमा वेवास्ता नगरी डाक्टरकहाँ जानुपर्छ ।
– धेरै महिलाहरु आफ्नो मासिक धर्मको डेट याद राख्दैनन् । यही कारणले फेरि कहिले महिनावारी हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई आँकलन हुँदैन । महिनावारीको अनुमान नहुँदा उनीहरुले दुख पाउँछन् । त्यसैले महिनावारी भएको डेट याद राख्नुपर्छ ।
– महिलाहरु एउटै प्याड लगाएर दिनभरी चलाउँछन् र राति मात्रै बदल्छन् । यो ठीक होइन । लगातार धेरै घन्टासम्म एउटै प्याड लगाउँदा संक्रमणको खतरा हुन्छ । त्यसैले हरेक ६ घन्टामा प्याड फेर्नुपर्छ ।
– महिनावारीका क्रममा वा त्योभन्दा अगाडि कतिपय महिलाहरुमा कब्जियत, डायरिया, पेटको दुखाई जस्ता समस्या पैदा हुन्छ । यस्तोमा उनीहरुलाई केही पनि खान मन हुँदै । तर यी दिहरुमा खाना राम्ररी नखाँदा तपाईंको शरीर कमजोर हुनसक्छ ।
– आजकालका कतिपय महिलाहरु रक्सी पिउन बाँकी राख्दैनन् । तर यसले उनीहरुको दुखाई झनै बढ्छ । साथै सुर्ति सेवनबाट पनि बच्नुपर्छ । यसको साटो चिया र पानी धेरै पिउनुपर्छ ।
– महिनावारीको दौरान असुरक्षित यौन सम्वन्ध राख्नु हुँदैन किनकी यसले संक्रमणको जोखिम बढ्छ ।
– महिनावारीका क्रममा केही महिलाहरुलाई असैह्य पीडा हुन्छ । पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि उनीहरु पेनकिलर खाने गर्छन् । तर यस्तो बेलामा धेरै औषधिको सेवन हानीकारक हुन सक्छ । यसले किड्नी र फोक्सोलाई असर गर्छ । पीडाबाट छुटकारा पाउनका लागि तातो पानीले सेक्नु उचित हुन्छ ।
यसकारण महिनावारी नियमित हुँदैन
पछिल्लो समय महिलाहरुमा डाइटिङ, व्यायाम धेरै गरेर तौल घटाउने होडबाजी जस्तै छ । तपाइँ महिला हुनुहुन्छ, र तपाईं तौल घटाउने यात्रामा पनि हुनुहुन्छ भने तपाइँले महिनावारीको चक्रमा जाँच राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।
किनकी महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलाका लागि महिनावारी चक्र महिलाको समग्र स्वास्थ्यको उत्तम सूचक हो । महिलाहरूले आफ्नो महिनावारी चक्रमा भिन्नताहरू सामान्य हो भनी विचार गर्छन् । तर, स्वास्थ्यविद्हरुका अनुसार महिनावारी असामान्यतालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
तौल घटाउने क्रममा शरीरको तौल घटाउने प्रक्रियाले तपाईंको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने संकेत गर्छ । पोषणविद् भक्ति कपूरले आफ्नो भर्खरको इन्स्टाग्राम पोस्टमा अत्यधिक व्यायामले शरीरलाई के गर्छ भनेर वर्णन गरेका छन् ।
धेरै व्यायाम गर्दा महिनावारीमा अनियमितता हुन सक्छ । महिलाहरूले एक वा दुई पटक महिनावारी नहुँदा कुनै हानि नभएको महसुस गरे पनि पोषणविद्ले यो आहारविहारमा गम्भीर समस्याको संकेत भएको बताएका छन् ।
कपूरले भनेका छन्, ‘मानिसहरू प्रायः व्यायामको अवधि वा तौल बढाएर आफ्नो कसरत बढाउँछन्, र अचानक तिनीहरू आफ्नो महिनावारी रोकिएको हुन सक्छ ।’
कपूरले यो पनि थपे कि जब शरीरमा प्रणालीलाई जारी राख्नको लागि पर्याप्त ऊर्जा हुँदैन, यसले हड्डी निर्माण लगायत प्रजनन् र वृद्धि जस्ता आवश्यक कार्यहरूमा ऊर्जा आन्दोलनलाई रोक्छ ।
पोषणविद्ले यो पनि खुलासा गरे कि, मस्तिष्कको एक क्षेत्रले ओभ्युलेसनलाई नियन्त्रण गर्ने हर्मोनको उत्सर्जनलाई रोक्न वा सुस्त बनाउँछ ।
तपाईको कसरतको दिनचर्यामा पिरियडहरू छुट्नुको तीनवटा कारणलाई हाइलाइट गर्दै, कपूरले यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर सुझावहरू पनि साझा गरे ।
कुनै वास्तविक आराम गर्ने दिनहरू छैनन् भने तपाईंले ऊर्जाको कमीको कारणले समयावधिलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले विदाका दिनहरूमा हिँड्दा पनि तपाईंको समस्याहरूलाई थप हुन दिँदैन ।
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा दुई जनामा हैजा पुष्टि
काठमाण्डु- काठमाण्डु उपत्यकामा थप दुई जनामा हैजा भेटिएको छ ।
उपत्यकामा हैजाको त्रास झन बढ्दो, कसरी लाग्छ ? यी हुन्…
काठमाण्डु- हरेक वर्षायाममा नेपालका विभिन्न भागमा हैजाका बिरामीहरू भेटिने गरेका
डा. हेमराज कोइराला काठमाण्डु – भनिन्छ पाचन क्षमता मजबुत भएकाहरूलाई
काठमाण्डु- नेपालमा पनि एक युवकलाई मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण भएको आशंका